Wafdi ka socda Jubooyinka iyo Gaarisa oo la kulmay maamulka degmada Bosaaso
January 26, 2013 - Written by
Boosaaso:-Wafdi uu hogaaminayo duqa magaalada Gaarisa Ismaaciil Cabdi Garaad iyo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolada Jubooyinka Khaliif Guure Cali ayaa maanta magaalada Bosaaso waxay kulan kula qaateen duqa magaalada Bosaaso iyo masuuliyiinta kale waxaana ay sidoo kale la kulmeen Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland Siciid Xuseen Ciid.
Kulanka dhexmaray wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolada Jubooyinka Khaliif Guure Cali iyo Duqa Degmada Gaarisa Ismaaciil Cabdi Garaad ayaa waxaa uu ka dhacay xarunta rugta ganacisga iyo warshadaha dowladda Puntland ee magaalada Bosaaso ee xarunta gobalka Bari waxaana ay ka wada hadleen sidii dowladda Puntland ay uga qaybqaadan lahayd dhismaha Maamul gobaleedka J/land , iyo qaabkii loo mataaneyn lahaa ganacsiga Degmada Gaarisa iyo Boosaaso.
Duqa Degmada Gaarisa Ismaaciil Cabdi Garaad oo la hadlay saxaafada markii uu soo idlaaday kulankii ay la qaateen masuuliinta magaalada Boosaaso ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay socdaalka uu ku yimid Puntland waxaana uu mahad balaaran u celiyey masuuliinta iyo waxgaradka ku soo dhaweeyey magaalada Boosaaso.
Gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolada Jubooyinka Khaliif Guure Cali ayaa sidoo kale u mahad celiyey masuuliinta magaalada Boosaaso iyo Isimada ku soo dhaweeyey magaalada Boosaaso .
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Siciid Xuseen Ciid ayaa sidoo kale la hadlay saxaafada waxaana uu sheegay kulanka in la isku afgartay dhamaan qodobadii laga wadahadlay wuxuuna sheegay in ay booqan doonaan magaalada Gaarisa si loo xoojiyo xiriirka labada dhinac.
Wafdi uu hogaaminayo duqa magaalada Gaarisa Ismaaciil Cabdi Garaad iyo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolada Jubooyinka Khaliif Guure Cali ayaa waxaa la filayaa in ay caawa kulan la qaataan Madaxweynaha dowlada Puntland Dr.C/raxmaan Maxamed Faroole oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso.
231,906 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress